၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး အဆိုတော် (၁၀)ယောက် - ရပ်ကွက်
ယောင်္ကျားတွေပဲ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ နေရာတစ်ခုရရှိလာခဲ့ပြီး ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်လာခဲ့ပါပြီ။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းထဲကို တစ်စတစ်စ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး အင်တာတိန်းမန့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကတော့ ၂၀၁၉ခုနှစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီးအဆိုတော် ၁၀ယောက်စာရင်းကို ပြုစုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်...။
၁၀. Mariah Carey
ဒေါ်လာသန်း၆၂၀ နီးပါး ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ အဆိုတော် Mariah Carey ဟာ နံပါတ်၁၀နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
၉. Lady Gaga
၂၀၁၉ ခုနှစ်ဟာ Lady Gaga ရဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ A Star Is Born ဇာတ်ကားနဲ့ Oscar ဆုရခဲ့ပြီး Shallow သီချင်းဟာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်တည်းမှာတင် ဒေါ်လာသန်း၃၀၀နီးပါး ရှာဖွေထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Lady Gaga ကတော့ နံပါတ်၉မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
၈. Victoria Beckham
ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့ဇနီး ဗစ်တိုးရီးယာဘက်ခမ်းဟာ အဆိုတော်လောကမှာသာမက ဖက်ရှင်နဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာပါ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမကတော့ နံပါတ်၈နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
၇. Jennifer Lopez
နာမည်ကျော် ပေါ့ပ်ဘုရင်မကြီး ဂျေလိုဟာလည်း အချမ်းသာဆုံး အဆိုတော်အမျိုးသမီးစာရင်းမှာ နံပါတ်၇နေရာ ချိတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ဒေါ်လာသန်း၃၀၀သာ ရှိခဲ့တဲ့ Beyoncéဟာ ယခုနှစ်မှာတော့ သူမရဲ့ ကြွယ်ဝမှုထဲကို ယခုနှစ်မှာတော့ နောက်ထပ်ပေါင်သန်း ၅၀၀ ထပ်မံပေါင်းထည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Rapper Jay-Z နဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဒေါ်လာ ၁.၂၆ ဘီလီယံအထိ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
၅. Celine Dion
အမျိုးသမီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လို့ တင်စားရတဲ့ Celine Dion ဟာလည်း နံပါတ်၅နေရာမှာ ရောက်ရှိနေတာပါ။
R&B လောကမှာတော့ Rihanna ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ယှဉ်နိုင်မယ့်အဆိုတော် ခပ်ရှားရှားပါ။ အသက်၃၁နှစ်အရွယ် Rihanna ဟာလည်း ၂၀၁၉ခုနှစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး အဆိုတော်အဖြစ် နံပါတ်၄နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၃. Shania Twain
ဘဝအစပိုင်းမှာ ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ Shania Twain တစ်ယောက် လက်ရှိမှာတော့ ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ အမျိုးသမီး အဆိုတော်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း သန်း၁၀၀ကျော် ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့စံချိန်ကို ဘယ်အမျိုးသမီး အဆိုတော်ကမှ မချိုးဖျက်နိုင်သေးပါဘူး။
၁၉၉၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၀အထိ Billboard Top Chart တွေမှာ Cher မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ သူမရဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ အသံဟာ ယခုနှစ်မှာတော့ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်း၃၈၀ နီးပါး ရှာဖွေပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး အဆိုရှင်ကတော့ Madonna ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်လောကမှာသာမက တခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင် ၊ အဝတ်အထည် ၊ skin care နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရေမွှေးလုပ်ငန်းတွေကနေ ယခုတစ်နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာသန်း ၅၈၀တိတိ ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။
Credit : Richest